Ny lisitry ny vakoka eran-tany UNESCO dia mitombo any Canada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar ary Poland
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny lisitry ny vakoka eran-tany UNESCO dia mitombo any Canada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar ary Poland
Ny Komitin'ny Lova Iraisam-pirenena dia nanoratra toerana ara-kolontsaina fito tao amin'ny lisitry ny vakoky ny UNESCO tamin'ny asabotsy. Ireo tranokala nampiana dia hita any Canada, Czechia, Alemana, Republic of Korea, Myanmar ary Poland. Hitohy rahampitso 7 Jolay ny soratra.
Tranonkala vaovao, araka ny baikon'ny soratra:
Bagan (Myanmar) - Mandry eo amoron'ny renirano Ayeyarwady ao amin'ny lemaka afovoan'i Myanmar, Bagan dia tontolo masina, misy karazana kanto sy maritrano Buddhist. Ireo singa valo ao amin'ilay tranokala dia misy tempoly, stupas, monasiteran'ny toerana fivahinianana masina, ary koa taolam-biby, arisolozy ary sary sokitra. Ny trano dia mijoro ho vavolombelona mahatalanjona amin'ny tampon'ny sivilizasiôna Bagan (11th-13th taonjato maro am.fi), fony io renivohitra io no renivohitry ny empira rezionaly. Ity ensemble an'ny maritrano lehibe ity dia taratry ny tanjaky ny fanoloran-tena ho an'ny fanjakan'ny bodista taloha.
Seowon, Akademia Neo-Confucian Koreana (Repoblikan'i Korea) - Ity tranonkala ity, miorina amin'ny faritra afovoany sy atsimon'ny Repoblikan'i Korea, dia misy sivy seowon, misolo tena karazana Akademia Neo-Confucusion an'ny tarana-mpanjaka Joseon (15th-19thtaonjato maro). Ny fianarana, ny fanajana ny siansa ary ny fifandraisana amin'ny tontolo iainana no tena zava-dehibe amin'ny seowons, aseho amin'ny endriny. Any akaikin'ny tendrombohitra sy loharano misy rano no tian'izy ireo kokoa mankasitraka ny natiora sy ny fambolena saina sy vatana. Ireo tranobe miendrika pavily dia natao hanamorana ny fifandraisana amin'ny tontolo. The seowons asehoy ny fizotry ny tantara iray izay nanarahan'ny Neo-Confucianism avy any Shina ny toe-javatra Koreana.
Writing-on-Stone / áísínai'pi (Kanada) - Ity tranokala ity dia miorina eo amin'ny sisiny avaratry ny lemaka karakaina any Amerika Avaratra, eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Kanada sy Etazonia. Ny Milk River Valley dia manjaka amin'ny topografitr'ity tontolo ara-kolontsaina ity, izay miavaka amin'ny alàlan'ny fitanana andry na hoodoos - tsanganana vato sokitra amin'ny fikaohon-tany ho endrika mahatalanjona. Ny Blackfoot (Siksikáííititapi) dia nametraka sary sokitra sy sary hosodoko teo amin'ny rindrin'ny fasika tao amin'ny lohasahan-driaka renirano, nijoro ho vavolombelona momba ireo hafatra avy amin'ny zava-masina. Ny tavela tamin'ny arkeolojika dia nanomboka tamin'ny taona 1800 TK ka hatramin'ny fanombohan'ny vanim-potoana taorian'ny fifandraisana. Ity tany ity dia heverina ho masina amin'ny vahoaka Blackfoot, ary ny fomban-drazan'izy ireo efa an-taonany maro dia notohizana tamin'ny fombafomba sy fanajana maharitra ireo toerana.
Erzgebirge / Krušnohoří Mining Region (Tseky / Alemana) - Erzgebirge / Krušnohoří (Tendrombohitra Ore) dia mandroso faritra any atsimo atsinanan'i Alemana (Sachony) sy avaratra andrefan'i Czechia, izay misy harena an-kibon'ny metaly marobe nohararaotina tamin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany nanomboka tamin'ny Moyen Orient. Io faritra io no nanjary loharanom-boaloboka lehibe indrindra tany Eropa nanomboka tamin'ny 1460 ka hatramin'ny 1560 ary izany no nahatonga ny fanavaozana ara-teknolojia. Tin dia ara-tantara no vy faharoa nesorina sy namboarina tao amin'io toerana io. Tamin'ny faran'ny 19th taonjato, lasa mpamokatra uranium manerantany ny faritra. Ny tontolon'ny kolontsaina amin'ny Ore Mountains dia niova endrika 800 taona tamin'ny fitrandrahana saika mitohy, avy amin'ny 12th ho an'ny 20th taonjato, miaraka amin'ny fitrandrahana, rafi-pitantanana rano mpisava lalana, fanodinana harena an-kibon'ny tany sy toerana fandrendahana, ary tanàna fitrandrahana.
Landscape ho an'ny fiompiana sy fampiofanana ireo soavaly mpitondra kalesy ao Kladruby nad Labem (Czechia) - Miorina amin'ny faritr'i Střední Polabí any amin'ny lemaka Elbe, ilay tany dia misy tany fisaka sy misy fasika ary misy tanimboly, kijana fefy, faritra misy ala sy trano, natao ho tanjona lehibe indrindra amin'ny fiompiana sy fiofanana kladruber soavaly, karazana soavaly volavolan-dalàna ampiasain'ny fitsarana empira Habsburg mandritra ny lanonana. Niorina tamin'ny 1579 ny toeram-piompiana imperial stud ary natokana ho amin'izany asa izany nanomboka teo. Izy io dia iray amin'ireo andrim-panjakana mpiompy soavaly any Eropa, novolavolaina tamin'ny fotoana nitana andraikitra lehibe tamin'ny fitaterana, ny fambolena, ny fanohanan'ny tafika ary ny solontena aristokratika.
Rafitra fitantanana rano ao Augsburg (Alemana) - Ny rafitra fitantanana rano ao amin'ny tanànan'i Augsburg dia nivoatra tamin'ny dingana nifandimby nanomboka tamin'ny 14th taonjato mandraka androany. Izy io dia misy tamba-jotra amin'ny lakandrano, tilikambo rano manomboka amin'ny 15th ho 17th taonjato maro, izay nisy milina fitrohana paompy, efitrano fivarotan-kena vita amin'ny rano, rafitra misy loharano telo lehibe sy tobin-jiro mpamokatra herinaratra izay manohy manome angovo maharitra ankehitriny. Ny fanavaozana ara-teknolojia namboarin'ity rafitra fitantanana rano ity dia nanampy tamin'ny fametrahana an'i Augsburg ho mpisava lalana amin'ny injeniera hydraulic.
Krzemionki Prehistoric striped Flinted Faritra Fitrandrahana Flint - (Polonina) - Any amin'ny faritra havoanan'i Świętokrzyskie, Krzemionki dia antokonà toerana fitrandrahana efatra, manomboka amin'ny Neolithic ka hatramin'ny vanim-potoana varahina (tokony ho 3900 ka hatramin'ny 1600 TK), natokana ho an'ny fitrandrahana sy fanodinana vatokely misy tsipika, izay nampiasaina indrindra ho famaky -making. Miaraka amin'ireo rafi-pitrandrahana ambanin'ny tany, atrikasa vatosoa ary lavaka sy lavaka 4,000 eo ho eo, ity tranonkala ity dia manasongadina ny iray amin'ireo rafitra fitrandrahana vatosoa ambanin'ny tany talohan'ny ela indrindra sy ny rafitra fanodinana fantatra hatreto. Manome fampahalalana momba ny fiainana sy ny asa any amin'ny toerana nonina taloha ny tranonkala ary mijoro ho vavolom-belona amin'ny fomban-drazana efa lany tamingana. Porofo miavaka amin'ny maha-zava-dehibe ny vanim-potoana talohan'ny vanim-potoana sy ny fitrandrahana vatosoa ho an'ny famokarana fitaovana amin'ny tantaran'ny olombelona.
The Andiany faha-43 ny Komitin'ny Lova Iraisam-pirenena dia mitohy hatramin'ny 10 Jolay.
Aostralia, Bahrain, Sina, India, Indonezia, Japon ary ny Repoblika Demokratikan'i Lao ao Lao dia mampiditra tranokala ao amin'ny UNESCO World Heritage List